HomeWararka CiyaarahaBrighton 4-0 Manchester United: Reds oo Xasuuq loo geestay
Manchester United ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u xun oo ay ku dhacday guuldaradii shanaad oo xidhiidh ah oo ay marti ku tahay Premier League iyada oo Brighton iyo Hove Albion ay 4-0 ku xasuuqday Red Devils ciyaar ka dhacday Amex Stadium.
Afar gool oo afar ciyaartoy ay u kala dhaliyeen ayaa Brighton siiyey guul 4-0 ay oo ay ka gaadhay Manchester United oo burbursanayd isla markaana meel la sheegi karo oo ay ka hagaagsanayd aanay jirin.
Bilowgii ciyaartaba waxay Brighton muujisay sida ay uga awood badan tahay Manchester United waxaanay ka ilaaliyeen kubadda iyadoo 15 daqiiqadood oo kaliya ay ku qaadatay in ay hoggaanka u qabato ciyaarta.
Kubbad ay difaaca Manchester United iska soo saareen ayuu Moisés Caicedo ka helay bannaanka, waxaanu qabadsiiyey darbo xoog badan oo uu goolhaye David de Gea joojin kari waayey, waxaanu goolkaasi noqday furaha xasuuqa soo gaadhay Red Devils.
Afar daqiiqadood oo kali ah markii ay socotay qaybta labaad ayay Brighton keentay gool labaad oo uu u dhaliyey difaaca bidix ee Cucurella oo kubbad gantaal ah oo uu ka laaday xerada ganaaxa shabaqa u weydaariyey goolhaye De Gea oo waayey difaac wax ka caabbiya.
Laba gool oo saddex daqiiqadood oo kali ahi ay u dhexeeyeen ayay Brighton ugu sii dartay Manchester United, waxaana daqiiqaddii 67aad gool quru xbadan dhaliyey Pascal Gross oo xataa goolhayaha u gooyey, ka hor intii aanu Leandro Trossard oo ahaa burburiyaha difaacu aanu goolkiisa keenin daqiiqaddii 60aad.
Manchester United ayaa dhalisay gool uu kubadda shabaqa ku leexiyey Edinson Cavani oo beddel kusoo galay, hase yeeshee nasiib-darro waxa lagu qaaday offside maadaama uu ka dambeeyey ciyaartoyda Brighton.
Natiijadan ayaa ka dhigan in Manchester United ay nasiibsanayso kaalinteeda lixaad ee horyaalka oo ay ku haysato 58 dhibcood iyadoo laba ciyaarood oo kali ahi u hadhsan tahay, waxaanay shan dhibcood ka dambeeyaan Arsenal oo afraad ku jirta laakiin afar ciyaarood u hadhsan yihiin iyo Tottenham oo ay ka hooseeyaan saddex dhibcood balse afar ciyaarood haysata.